एशिया प्यासिफिक समिट–२०१८ नेपालको संविधान विपरित छः डा. लोहनी
काठमाडौं । एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका असन्तुष्ट समूह, पशुपति शमशेर जबरा र आफूहरुबीच छिट्टै एकता हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामीबीच एकताको छलफल चलिरहेको छ ।’
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले तीनवटै राप्रपाबीच एकता भयो भने ठूलो शक्ति हुने दाबी गरे । उनले भने,‘तीनवटै राप्रपाबीच एकताको प्रयास भएको हो ।
तर, फ्रेमवर्क डकुमेन्ट बनाउन उहाँहरु मान्नुभएन् । त्यही भएर एकता भएन् । तर, हामी र पशुपतिजीबीच छलफल भैरहेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका असन्तुष्ट साथीहरुपनि हामीसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । सम्भवतः अब एक साताभित्र एकता हुन्छ ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँगपनि एकताको लागि आफूहरु खुल्ला रहेको सुनाए । उनले भने,‘राप्रपाका असन्तुष्ट साथीहरुसँगपनि हाम्रो लगातार छलफल भएको छ । हामी सकेसम्म चाँडै एकता गर्छौं ।’
डा. लोहनीले भने,‘नेपालको लागि यो भेलाको उद्देश्य युनिफिकेसन चर्चको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने र उक्त चर्चका इसाइ पादरीबाट नेपालका ठूलाबडाका दम्पतिसहित आशीर्वाद लिने काममा सिमित रहेको देखिन्छ ।
युनिफिकेसन चर्चको बजारीकरणमा नेपाल सरकारले दुई करोड़ खर्च गरी हिस्सेदार बनेर हिन्दु र वुद्ध भूमि नेपालको सांस्कृतिक जग बलियो हुन्छ भन्नु अर्थहीन हो ।’
नेपाल सरकारले विवादस्पद संस्थाको बजारीकरण र बढावा दिन, र उनीहरुको हातबाट आर्शिवाद लिने काम किन गर्यो भन्दै लोहनीले पटक–पटक प्रश्न समेत तेर्साए ।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन वा उहाँले नियन्त्रण नै गर्न चाहनुभएन् । सक्नुभएन भनौं भने दुई तिहाईको बहुमत छ । तर, भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ ।’
बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज यतिका महिना बितिसक्दापनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेकोमा उनले सरकारले आलोचना गरे ।